Noqo Iibiyaha Bitcoin | Paxful
Dakhli soo xaree adoo ku iibinaaya Bitcoin aalada Paxful adeegsanayana dookhyadeena lacag bixinta ee ka badan 350+
Gudaha Paxful, biloow ganacsigaaga gaarka ah muddo daqiiqado ah gudaheed. Abuur yaboohyada Bitcoin kaaga, daji qiyaasta faa'iidada, oo dhis khibrada qaaska ah ee macmiilka si aad u kordhiso faa'iidooyinkaaga. Isku diiwaangeli iibiye ahaan maanta kadibna abuur yaboohaagii ugu horeeyay.*
Tirada caadiga ah ee qaybaha si aad u maamusho ganacsiyadaada, yaboohyadaada, iyo tirakoobkaaga
Tiro ka badan 6 milyan oo isticmaalayaal ah ayaa iska diiwaan gashay daafaha caalamka
Waxaa ku kalsoonaaday in ka badan 12,000 oo macaamiisha ka diiwaan gashan Bitcoin ah
Taageerada joogtada ah ee saraysa oo lagu helaayo khibrad ganacsi oo fudud
Keen Bitcoin kaaga Paxful kadibna iibi si aad faa'iido u hesho
350+ oo ah noocyada lacag bixinta
Qarashka lacag dirista 0-2%
Taageerada Qaaska ah ee iibiyaasha ganacsiga tirada badan
Dulmarka lacagaha la diro iyo faa'iidooyinka
Barnaamijka iskaashatada si aad usoo geliso barta iibiyaal cusub aadna u balaariso ganacsigaaga
Ku ganacso Paxful oo biloow ganacsigaaga gaarka ah ee lacagta oonleenka ah
Qiimaha Hadda ee Bitcoin:
1. Abuur ama hel yabooh
Waxaad raadin kartaa ama abuuri kartaa yabooha labadaba iibsiga iyo iibinta Bitcoin. Degso qiimayaashaada gaarka ah, hel qof ganacsi kula sameeya, oo samee lacag dirista koobaad maanta.
2. Dhis barofaylkaaga
Hel iibsadayaal adoo buuxinaaya xaqiijinta, ku daraaya sawirka barofaylka, aruurinaayana jawaab celin caafimaad leh. Inaad hesho taariikhda ganacsiga oo dheer waxay kordhisaa sumcadaada waxayna kaa caawinaysaa inaad kalsoonida macaamiisha mustaqbalka.
3. Ganacso oo hel faa'iidooyin
Ayadoo jaban iibso, qiimo sare ku iibso. Tani waa aasaaska naqshada ganacsi heer sare ah waana waafaqsan nahay. Xog badan ka ogoow fursadaha ku ganacsiga Paxful, ood ka baranayso xarunteena.
Hel xogta, markaad doonto, meel kasta
Haka walwalin gafida ganacsiyada muhiimka ah, ama fariimaha macaamiisheena ka yimaada. Paxful waa aalad ay fududahay in la adeegsado waxayna ku shaqaysaa dhammaan aaladaha. Ababkeena iOS iyo Android, ayaa xaqiijin doona inaad markasta heegan tahay aadna ficil diyaar u tahay.
Xog badan ka ogoow Barnaamijka Iskaashatada Paxful
Barnaamijka Iskaashatada Paxful waxaa loo abuuray inuu kaa caawiyo kordhinta faa'iidooyinkaaga adoo ku casuumaaya saaxiibadaa, qoyskaaha, iyo shabakadaada balaaran barteenka.
Faa'iidooyin degdeg ah oo ku helayso Ganacsi Kasta:
50% oo kamid ha qarashaadkaaga iskaashatada Qaybta 1
10% ood ku helayso qarashaadka iskaashatadaada Qaybta 2 ee ay baxshaan iskaashatadu
Arag kuwo Kale
* Waxaad aqbalaysaa aadna ogolaanaysaa in Paxful aysan bixin talo sharci, canshuur, ama maal geshi, aadna illaa heerka muhiimka ah, la tashan doonto xirfadlayaasha arintaas ku taqasusay ee deegaankaaga kahor intaadan isticmaalin nidaamka Paxful ee dadkau toos lacagaha iskugu dhaafsadaan aadana noqon Adeeg bixiye. Fadlan ogoow in wax soosaarka hore uusan caddayn u ahayn waxsoosaarka danbe. Paxful ma samaynayso wax damaanaad ah ama balamo kale oo ku aadan natiijooyinka ama wax soosaarka dhaqaalaha oo laga heli karo in iibiye laga noqdo aalada Paxful waxaadna aqbalaysaa aadna fahmaysaa in dhammaan go'aannada adeegsiga nidaamka isdhaafsiga tooska ah ee Paxful ay yihiin gabi ahaanba kuwo adigga kugu xiran. Waxaad fahmaysaa aadna aqbalaysaa inaanaan qaadanayn wax masuuliad ah noocay tahayba, aanana sinaba masuul uga noqon doonin wax quseeya, xgo'aankaaga. Waxaad fahmaysaa aadna aqbalaysaa inaan marna isticmaalka anaanka tooska ah ee dadku wax ku kala iibsadaan ee Paxful iyo noqoshada iibiye aan loo arki karin xariir ay ku jiraan bixinta ama kala gadista talo maal gashi.